အလုပ်သမား အခွင့်အရေး ရပိုင်ခွင့်တွေကို တောင်းဆို ဆန္ဒပြနေတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ မြောင်းတကာ စက်မှုဇုန်မှာ ရှိတဲ့ Yangon Crown ရန်ကုန်သရဖူ သံမဏိစက်ရုံက အလုပ်သမားတွေကို ရွှေည၀ါဆရာတော်က တနေ့ ထမင်းနှစ်နပ်စာ ဒီနေ့လည်း ဆက်လက်လှူဒါန်းပါတယ်။
ရွှေညဝါဆရာတော် အရှင်ပညာသီဟကို ဖူးမြင်ရစဉ်
အခြေခံလစာ နည်းနေတာ ပြန်ညှိနှိုင်းဖို့၊ အချိန်ပိုလုပ်အားခ သတ်မှတ်ပေးဖို့၊ ခွင့်ရက်နဲ့ ပိတ်ရက်တွေ ညှိနှိုင်းပေးဖို့၊ အစိုးရ ရုံးပိတ်ရက်တွေကို အလုပ်ပိတ်ရက် သတ်မှတ်ပေးဖို့ အပါအ၀င် အချက် ၁၃ ချက်ကို အလုပ်သမားတွေ စတင်တောင်းဆို ဆန္ဒပြတဲ့ မေလ ၂၁ ရက် ကတည်းက အခုလို သူကလှူဒါန်းနေတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆရာတော်က မိန့်ပါတယ်။
တိုက်ကြီးမြို့ MGE အထည်ချုပ်စက်ရုံက ဆန္ဒပြ အလုပ်သမားတွေကိုတော့ အရင်နေ့တွေမှာ ဆရာတော်က ထမင်းနှစ်နပ် လှူဒါန်းနေပြီး တခြားအလှူရှင်တွေက ဒီနေ့ လှူဒါန်းတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Yangon Crown စက်ရုံတာဝန်ရှိသူတွေက အလုပ်သမားတွေ တောင်းဆိုတာကို ဆက်လက် ငြင်းပယ်တာကို တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ အလုပ်သမား ခေါင်းဆောင်တွေ မနေ့က စတင်ပြီး အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြနေပါတယ်။ ရေရှည်မှာ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ပြီး အလုပ်သမားအရေး ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ရာမှာ ထိခိုက်မှာကို စိုးရိမ်ရတဲ့အတွက် အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြတာကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ဖို့ အစီအစဉ်တွေကိုလည်း ညှိနှိုင်းနေတယ်လို့ ဆရာတော်က မိန့်ပါတယ်။
ထိုင်းက မြန်မာအလုပ်သမားကိစ္စ သံရုံးကို အကူအညီတောင်းမည်
ဆန္ဒပြအလုပ်သမား ၈ ဦး ပြန်လည်လွတ်မြောက်
နှစ်ပြည့်ကြေးနဲ့ ကျွမ်းကျင်ကြေး တိုးပေးဖို့ အလုပ်သမားတွေ ဆန္ဒပြ
မဲဆောက်တဝိုက် မြန်မာ အလုပ်သမား ၄၀၀ လောက် အဖမ်းခံရ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီး များနေ့ ချီတက်တောင်းဆိုပွဲ အလုပ်သမ တစ်ထောင်ခန့် ပါဝင်
ကျောက်ဆည်မှာ အထပ်သား စက်ရုံ အလုပ်သမားတွေ သပိတ်မှောက် ဆန္ဒပြ
ခုံသမာဓိကောင်စီ အဖွဲ့ဝင် အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ် ၅ ဦးကို ကန့်ကွက်
လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာထုတ် လုပ်ရေးစက်ရုံက အလုပ်သမားတွေ ဆန္ဒပြ
Please do not sell them out later. Most mediaters are collaborators.
May 27, 2012 05:20 AM
should not be ဆက်လက်လှူဒါန်း
should be စွန်.ုကဲ လှူဒါန်း